Umgaqo-nkqubo weKuki Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Umsebenzisi angadibana nohlobo lweicookies ezisetyenziswa nguGoogle, uGoogle + Cookie kunye neMephu zikaGoogle, ngokwemigaqo ekwiphepha layo malunga nokuba yintoni Uhlobo lwe cookies ezisetyenzisiweyo.
I-cookies ze-DoubleClick azinalo ulwazi oluchaziweyo. Ngamanye amaxesha, ikuki iqulathe isikhombi esongeziweyo esibonakalayo kwinkangeleko yesazizi. Esi sikhombi sisetyenziselwa ukuqaphela umkhankaso wentengiso apho umsebenzisi wayeveziwe khona ngaphambili; Nangona kunjalo, i-DoubleClick ayigcini naluphi na olunye uhlobo ledatha kwikuki kwaye, ukongeza, ulwazi aluchazeki ngokobuqu.
Ezi cookies azichazi nayiphi na inzuzo kumntu ojongene nale webhusayithi. I-Automattic, Inc., ikwasebenzisa ezinye iicookies ukunceda ukujonga kunye nokulandelela iindwendwe kwiindawo zeWordPress, ukwazi ukuba bayisebenzisa njani iwebhusayithi ye-Automattic, kunye nokukhetha kwabo ukufikelela kuyo, njenge Ifakiwe kwicandelo "leekuki" zomgaqo-nkqubo wabucala.
Own: Iseshoni yeemtsnb_referrer mtsnb_seen_2923
Baphelelwa ekupheleni kweseshoni. Bayagcina ulwazi lomsebenzisi kunye neeseshoni zabo ukuphucula amava omsebenzisi.
Iintsuku ze30 Le cookie isetyenziselwa ukubuyela ekujolise kuyo, ekusebenzeni kakuhle, ekuxeleni nasekwaziseni izibhengezo zentengiso kwi-intanethi. I-DoubleClick ithumela ikuki kwibrawuza emva kwawo nawuphi na umsebenzi wokushicilela, ucofe okanye omnye umsebenzi obangela ukuba ube nomnxeba kwiseva ye-DoubleClick. Ukuba isiphequluli samkela ikuki, igcinwa kuyo. Ulwazi oluninzi
info (at) abalandeli.online yenza ukuba kufumaneke kubasebenzisi abafuna ukuthintela ukufakelwa kweicookies esele zikhankanyiwe, amakhonkco anikezelwe le njongo zizikhangeli ezisebenzisa ukusetyenziswa kwazo kuthathwa njengokuxhaphakileyo:
Umgaqo-nkqubo wecookies ugcine ukuvuselelwa nge-18/04/2016